War Deg Deg Ah: Kumanaan Somali Ah Oo Laga Soo Celinaayo Dalka Maraykanka - Wargane News
Home Somali News War Deg Deg Ah: Kumanaan Somali Ah Oo Laga Soo Celinaayo Dalka...
Dowladda Mareykanka ayaa qorsheynaysa in dalkaasi ay ka soo celiso Somali badan oo hadda ku sugan dalka Mareykanka sida uu sheegay Safiirka Somaliya ee dalka Mareykanka.
Axmed Ciise Cawad Safiirka Somaliya ee dalka Mareykanka ayaa wuxuu sheegay Hay’adaha qaabilsan dhanka socdaalka dalka Mareykanka inay ku wargeliyeen in Somali badan dalkaasi laga soo masaafurinaayo.
Wuxuu sheegay markii ay u kuurgaleen arintaasi, islamarkaana ay baareen tirada Somalida la qorsheynaayo in dalka Mareykanka laga soo celiyo ay noqotay mid aad u badan.
Hay’adaha Socdaalka dalka Mareykanka waxa ay u sheegeen Safiirka Somaliya ee dalka Mareykanka qorshaha inuu yahay in Somaliya lagu celiyo dad gaaraya 4,000 oo ruux oo Somali ah.
“Markii aan anaga haybinay oo aan ka wareysanay dadka Somalida ah tirada ay rabaan inay waddanka ka saaraan inay tahay 4,000 badankoodana aysan aheyn dad hadda xiran ama ku jira meelaha dadka lagu haayo, dadka la amray in wadanka laga kaxeeyo waa tiro dhowr boqol ah saddex boqol oo wax dhiman oo hadda warqadahooda naloo soo gudbinayo oo la rabo in dhawaan la celiyo, kuwa kale oo badan ayaa jira oo gaaraya 4,000.” Safiirka Somaliya ee dalka Mareykanka .
Marka laga soo tago tirade 4,000 ee Somalida ah ee dib loogu soo celinaayo Somaliya, qorshaha waxa uu yahay dad gaaraya 300 oo ruux in dhawaan dib loogu soo celiyo Somaliya, kuwaasi oo Safaaradda loo gudbin doono warqadahooda.
Ma cadda illaa hadda sababta rasmiga ah ee salka ku haysa in dib loo soo celiyo tiro Somali ah oo intaasi la eeg, kuwaasi oo ku sugan dalka Mareykanka.